Blog Blog nke Tagged Indian "Ihe omuma na ihe omuma" - THE INDIAN FACE
Ọ bụrụ n’inwe obi abụọ maka ụdị iko a, ma na-achọ inweta ya, gụchaa, chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara ị sụ iko ugogbe anya. polarizado.
Burunụ iko maka egwuregwu Ọ dị mkpa na mmega ahụ niile anyị na-eme n'èzí. Echiche a bụ nnwere onwe nke ngagharị n'ụzọ ọ bụla iji gbado anya na ime ihe na ilekwasị anya n'okike.
Ihe 10 gbasara sọfụfụ ị kwesịrị ịmara
Anyị achịkọtara ihe kachasị mma gbasara ịtụnanya, ka ị nwee ike ịmụtakwu banyere egwuregwu a dị egwu. Can't gaghị agbaghara ha!
N'iji ugogbe anya maka ugogbe anya maka anwụ: O doro anya na ọ bụghị oge doro anya ị ga-eyi ugogbe anya maka anwụ
Ha na-eyi ugogbe anya ha nke ọma? Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịdị anyị ka ọ bụ “ihe doro anya” mgbe anyị ga-eyi ma ọ bụ ịghara iyi ugogbe anya. Ma mgbe ụfọdụ o yikwara ka ị mata n ’anya n’enweta ugogbe anya maka anwụ maka gị. Ma, ọ bụghị mgbe niile doro anya.
Iko egwuregwu Egwuregwu
Ọ bụrụ na ị na-eme egwuregwu n’èzí na egwuregwu dị ka ịgba ọsọ, ịgba ọsọ, sịnịma, ịgba ígwè, ịgba ọsọ na ihe ndị ọzọ, ị maara nke ọma na ọhụụ gị bụ otu n’ime akụrụngwa bara uru gị.
Mpempe akwụkwọ snow, họrọ nke kachasị mma na usoro atọ
Ọ bụrụ n’ị na-abanye n ’ụwa nke ịgbaze snow, ma ọ bụ chọọ ịchọrọ iji nke ka mma dochie iko ochie gị, anyị nwere usoro zuru oke maka gị ịhọrọ nke ọma n’oge ọzọ ị ga-azụ. golfles. Họrọ nke gị na nzọụkwụ atọ!
Ski Goggles: Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịmara gbasara goggles ski!
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ịchọrọ ịmatakwu karịa ịzụta nke gị iko ugoAnyị na-ewetara gị mmeghe nke ga-ewepụ obi abụọ gị. Ozugbo ịhọrọla skis gị, uwe ọkụ, kootu, okpu na uwe aka oge eruola ịhọrọ nke kacha mma. iko ugo.
Ugo ugogbe anwụ: M ga-eyi ha oge niile?
Ghọta mkpa ị na-ebu egwuregwu ugogbe anya maka anwụ Ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu n’èzí, ọ ga-abụ isi igodo gị iji chebe onwe gị nke ọma ma nwee ahụ iru ala mgbe ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-emega ahụ n’èzí.
Iko enyo dị na ntanetị: Ndụmọdụ bara uru maka ịzụrụ ugogbe anya maka anwụ na ịntanetị
Nke nta nke nta, anyị achọpụtala na ịzụrụ ihe n'ịntanetị na-abawanye uru, dịkwa mfe ma dịkwa mkpa n'oge a. Ma ihe kacha atọ ụtọ bụ na anyị nwere ike ịzụta ihe niile! Site na ịzụ ahịa maka ezinụlọ gị, ruo n'ịhọrọ ugogbe anya maka anwụ.
Iko na-agba ọsọ
Enweghị ike ịhapụ ịgagharị mgbe ị na-eme ọsọ na Trekking. Egwuregwu n'èzí na-atọhapụ ukwuu maka ahụ na mmụọ. Ha na-eme ka anyị nwee mmetụta nnwere onwe nke na-adịbeghị n'ime ụlọ.
Ọ bụghị ugogbe anya maka anwụ dị mma maka ụdị ọrụ a, ọ ga-akacha mma iyi iko egwuregwu dị mma nke dabara na ihu anyị ma nọrọ ebe ahụ tupu igwe ọ bụla anyị na-arụ.
Magnetik sko goggles
Egwuregwu snow dị ka ski ma ọ bụ ịnya ụgbọ mmiri abụghị egwuregwu. Ndị a bụ egwuregwu dị oke egwu chọrọ nkwadebe na ọnọdụ dị mma. Agbanyeghị na anyị na-ekwe nkwa na agụnyere na ntụrụndụ na adrenaline, ọ dị mkpa ka ị tinye ihe kachasị mma na akụrụngwa ị yi iji rụọ ya, gụnyere ụfọdụ iko magnetik na-akwado ma na-echebe gị ka obi ghara iru gị mgbe ịwụnye.
Officelọ Homelọ: Uru na ọghọm nke telefon
Dị ka aha ya si kwuo ya nke ọma, ụlọ ọrụ ụlọ ma ọ bụ telegram si n'ụlọ bụ ọrụ niile ndị ọrụ na-arụ site na adreesị ụlọ obibi ha, na-eji ohere dị iche iche dị ka kọmputa, ntanetị, nyiwe ozi na oku ekwentị, yana mmemme. nhazi ọrụ na ọrụ rue mgbe ọ bụla.
Ugogbe anya maka anwụ abụghị naanị ihe dị mkpa, ha dị mkpa iji na-ekwe nkwa nchebe na anya acuity. Obere ma ọ bụ n’egwuregwu n’èzí ekwesịghị ime iko egwuregwu, nke mbụ maka nchebe na nke abụọ maka ịba uru.
10 ihe ị kwesịrị ịma gbasara ugwu ugwu ma ọ bụ ugwu ugwu
El ịrị ugwu Ọ bụ omume egwuregwu nke metụtara ịrị elu ugwu na agbago ugwu dị elu, bụ nke na-ebu ọtụtụ amamihe, ihe ọmụma na usoro iji wee ruo ebe kachasị elu nke nzuko kwuru.
A maara na ugwu ugwu bụ ezigbo ọzụzụ anụ ahụ sara mbara dabere na ọpụrụiche ya, yana ndị egwuregwu na ọha mmadụ nabatara ya ebe ọ bụ na o metụtara ọtụtụ ihe egwu metụtara, na-achọ nkwadebe siri ike, na mgbakwunye na ọchịchọ ịchọrọ ọkaibe na nnukwu agụụ maka njem.
Uwe mmiri: S ga-achọ mgbe ịzụrụ
Egwuregwu snow dị ka ski na snowboard jupụtara na njem, adrenaline na agagharị. Ndị na-eme egwuregwu ndị a maara mkpa ọ dị ijide ịdọ aka ná ntị, yana etu o si dị mkpa iji eyi ngwa kwesịrị ekwesị, n'ihi na ọnọdụ ihu igwe bụ ihe dị mkpa.
Cheta na ha bu egwuregwu nwere nsogbu ha nwere, ya mere anyi aghaghi ikpuchi onwe anyi nke oma!
Know ma ka esi azụ ugogbe anya maka anwụ.
Nwere ike 12, 2020
Identchọpụta iko dị mma ga-adị mfe ma ọ bụrụ na ị maara otu esi eme ya. Ọ ga-ezuru iji lelee ma ọ bụrụ na ha na-ebu ezigbo akwụkwọ mmado na-egosipụta pasent nke UVB na ụzarị UVA nke na-egbochi oghere ha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ ịdị mma maka ugogbe anya maka ugogbe anya maka anwụ, ị nwere ike ịkpọga ya n'ụlọ ahịa ngwa anya dị na mpaghara gị ma gosipụta na mita UV na ugogbe anya gị nwere nchedo egosipụtara.
Ndụmọdụ 5 iji gbochie ọrịa cancer anya
Anyị na-ewepụta usoro ise ga-enyere gị aka igbochi kansa ọrịa anya. Ọ dịịrị anyị ime ike ọ bụla iji nwee ahụike anya zuru oke ma zere nke a na ọrịa ndị ọzọ nwere ike imetụta anya anyị.
Nchedo ugogbe anya maka anwụ
Nwere ike 01, 2020
na ụdị ugogbe anya maka anwụ na nchedo ha nke lenses nke anyanwụ setịpụrụ site na 0 ruo 4. Ọ bụghị n'ihi na ha mere okenye ụdị nchedo Ha ga - echebe gị nke ọma ma ọ bụ karịa ka ọ ghara ịchafụ UV400 yndị ahụ na-egosi ego ọkụ ha kwere ka ha gafee ma na-agbakwunye nke a na igwe anyanwụ UV400